दशैंमा खेती भेन्चरबाट सामान खरिद गर्दा ५७ प्रतिशतसम्म छुट - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईटी क्षेत्रका आकर्षक जागिर, कति होला तलब ?
दशैंमा खेती भेन्चरबाट सामान खरिद गर्दा ५७ प्रतिशतसम्म छुट
मंगलबार, आश्विन १९, २०७८
काठमाडौं । दशैंलाई लक्षित गर्दै खेती भेन्चरले ‘दशैं धमाका’ अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत ‘महा दक्षिणा’ स्वरूप ‘खेती फुड’ र ‘खेती फार्म’ मार्फत सामान खरिद गर्दा ग्राहकले ५७ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्ने छन् ।
साथै खेती फार्मको मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो अफर अवधिभर कृषकले निः शुल्क परामर्श सेवा समेत लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार असोज १ बाट सुरु भएको यो अफर असोज मसान्त सम्म चल्ने छ ।
कम्पनीका अनुसार नियमित छुटका साथै प्याकेजमा खरिद गर्दा नगद छुटको पनि व्यवस्था रहेको छ । खेती फार्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले बिउबिजन, मलहरू तथा भर्टिकल मिनी टिलरमा १० हजारसम्म विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै दशैं धमाका अन्तर्गत खेतीबाट कुनै पनि समानको खरिदमा ५ प्रतिशतदेखि ५७ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । पेशाको रुपमा पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्र राम्रो आकर्षणको विषय बनेको छ ।
डिजिटल बैंकिङमा अग्रसर एनएमबि बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले विश्व प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरेको छ । बेलायतको लण्डनबाट प्रकाशित हुने
इन्फी किताब कार्निभल सुरु, अनलाइनबाट पुस्तक अर्डर गर्दा ८० प्रतिशतसम्म छुट !
काठमाडौं । विगतमा मानिसहरू आफ्नो समय किताब पढेर बिताउने गर्दथे । तर अहिलेको परिवेशमा भने
अब ५० रुपैयाँमा हप्ताभर ला लिगा फुटबल हेर्न पाइने
काठमाडौं । डीटीएच सेवा प्रदायक डिशहोमले विश्व चर्चित स्पेनिस ला लिगा फुटबलप्रेमीका लागि नयाँ योजना